George van Houts, mpamitaka, tsy misy miafina amin'ny banky na ny placier ho an'ny mpitsikera? : Martin Vrijland
George van Houts, mpamitaka, tsy misy miafina amin'ny banky na ny placier ho an'ny mpitsikera?
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 29 Janoary 2019	• 10 Comments
Inona no vokatra tsara indrindra nataon'i George van Houts sy ny tarika teatrany izay nataon'ireo mpamitaka. Na ny vaomiera fikarohana aza natsangana ho setrin'ny lahatsary 'Tsy misy miafina'! Ao 17 Janoary, ao La Haye mitatitra mihitsy aza ny vola sy ny trosa: ny andraikitry ny banky-bahoaka 'natolotry ny WRR (Scientific Council for Policy Governemanta), fanadihadiana dia ho entina avy manaraka io lahatsoratra io. Izany dia asa tsara indrindra. George van Houts dia miteny araka ny fiteniny manokana fa mbola miasa ny demokrasia ary ianao dia mahavita zavatra mahomby ao La Haye, tena azo atao izany. "Olom-pirenena isika"Nanampy zava-manitra kely i Leopold Witte. Tsia: mpilalao sarimihetsika ianao.
Inona no tratra? Eny, fa na inona na inona niova, afa-tsy ny "fahatsiarovan-tena" ao amin'ny fiaraha-monina no nahatonga fa angamba misy zavatra tsy mety, fa indrindra ny fiheverana fa ny politika no mihaino ny olom-pirenena. Ary mazava ho azy dia hanoto ny fiovana izay efa nomanina, fa ny ara-bola maneran-Reset, ny governemanta indray ny fifehezana ny vola amin'ny alalan'ny, ohatra vola vaovao rafitra mifototra amin'ny crypto-bola-tahaka ny fitsipika. Ary mazava ho azy fa izany rehetra izany dia fehezin'ny demokrasia lehibe antsoina hoe EU.
Jereo ny mpametram-baovao etsy ambany, vahiny iray miaraka amin'ny lahateny malefaka sy mpikarakara tsara an'i Matthijs van Nieuwkerk. Hitantsika ny porofo velona fa ny fialam-boly mora ampiasaina dia miaina amin'ny fialam-boly mialoha izay miserana ka mahatonga ny fijeriny fa tena hampiasaina ilay fiovana. Ireo mpilalao sarimihetsika tao amin'ny teatra izay namaky ireo mpilalao tao amin'ny teatra politika tao La Haye sy Bruxelles. Ny Theaterclub A dia hahatonga anao ho mamy miaraka amin'ny teatra an-tsehatra momba ny klioban'ny teatra B. Mieritreritra ve ianao fa ny vinaingitra dia misotro? Vakio eo ambanin'ilay horonantsary ary avelao ho entina any amin'ny teatra teatra manaraka momba ny lohahevitra farany izay tsy maintsy tratrarina ihany koa ny sasantsasany avy amin'ny vondron'olona.
George sur Houts nanao teatra na dia marihina eo amin'ny hevi-dratsy toy ny 911, izay hita mazava tsara ny fomba azo antoka fa manana ny olana ny fanontaniana ilaina mba nanangana ny fiaraha-monina rehetra hodinihina: Ao amin'ny endriky ny teatra. Fantatrao ve ny antsointsika hoe zavatra toy izany? Fanoherana mifehy. Ny tanjon'ny mifehy mpanohitra dia ny foto-kevitra subcutaneously ny fiainana rehefa ny olona hankalazaina, mitabataba, ary nanompo tao amin'ny saosy-diso fanantenana eo amin'ny famantarana ny fanadinoana. "Tsia, tena tsy izany! Dia tsy nihaino tsara ianao! Te-hanamboatra lalao fanaraha-maso amin'io sehatra io ihany koa i George". Ah, sambatra, fa tena hiova tokoa ny zavatra iray! Ho tsara daholo izany rehetra izany! Efa nividy tapakila ho an'ny kianja filalaovana tantara an-tsehatra ianao ary hanao izany indray, satria toa miasa! Na dia ny filankevitry ny fikarohana aza dia voafehy (fantatrao toy izany amin'ny mpitety vola voakaramanao vola, izay mametraka teny tsara an-tsoratra mba hamoahana teny mahafinaritra ao amin'ny teatra ao The Hague)!
Mino ve ianao fa ny mpanohitra tena mahazo vahaolana amin'ity firenena ity? Dia ianao no manintona ary Vrijland dia pessimist. Inona no hataonao raha tianao ny hitazona ny fisehoan'ny demokrasia? Dia mandre ka fantatrao amin'izany. Ary misy ny lalao manaraka avy amin'ireo mpamaky ireo 'mpamitaka'. Izy ireo dia tsy maintsy maka fanahy anao ao amin'ny sambo vaovao amin'ny sambo mpanjono. Ny trondro ao amin'ity ranomasina ity dia miara-miasa amin'ny tontolo manodidina azy, ka miteraka fiovana sy karazan-trondro izay mampiseho fihetsika vaovao. Izany no mahatonga ny tompon'ny fiaramanidina manamboatra sambo vaovao, miaraka amina tamba-jotra vaovao izay tsy maintsy manangona trondro mipoitra (izay trondro miaraka amin'ny hevitra vaovao sy ny eritreritra) ao anaty sambo. Ny sambo vaovao dia manome ny fahatsapana ny eo an-tanan'ilay trondro vaovao ary mitondra azy ireo ho azo antoka sy hampitony rano. Indray mandeha any an-tsambo dia mbola mifarana amin'ny filerij ianao, fa ny kapitenin'ilay sambo vaovao voamarina dia tsy hilaza aminao mihitsy. Tsy maintsy afaka mitazona ny fiarany lafo izy.
Ny lalao manaraka avy amin'ireo mpilalao sarimihetsika mpanohitra ny mpanohitra, tsy maintsy 'mahafantatra' ny rafitra fanaraha-maso ao amin'ny firenentsika; ireo rafitra fitsikilovana ireo sampan-tserasera miafina miaraka amin'ny angona lehibe. Ary mety ho tezitra kely amin'izany ianao ary mazava ho azy fa ny sary natsangana dia 'nakarina' ny version ny marina, fa ianao kosa manana anao toerana Avy amin'ny trilogie ny Matrix dia afaka mitelina indray ny fialam-boly sarobidy ataon'ireo mpangalatra marefo izay ataonao eo amin'ny sambo vaovao. Tongasoa eto!
Maninona isika no tratra ao anaty tamba-jiro 911 amin'ny olona toa an'i George van Houts
Ny vaovao momba ny fampahalalam-baovao dia vaovao sandoka nandritra ny am-polotaona maro, fa izahay dia zatra loatra ka tsy fantatsika izany
Be dia be ny nanoratra momba ny Trumanshow ny 'zava-misy isan'andro'
Tags: banky, banky, banky, varavarana, nampiseho ny DWDD, George van Houts, Leopold Witte, niksteverbergen, rafitra, teatra, teatra, mpamitaka
29 Janoary 2019 ao amin'ny 13: 25
van Houts cum suis, ireo mpanangom-bola amin'ny fotopampianarana momba ny ahiahiana mahazatra. Miankina amin'ireo ahiahiana mahazatra izany
miasa. Mazava ho azy izany.
29 Janoary 2019 ao amin'ny 13: 48
Avelao aho hilaza fa tsy ny banky ihany no ahazoantsika 😀 Mazava ho azy fa adiadin-kevitra izany ...
29 Janoary 2019 ao amin'ny 16: 10
Ao amin'ireo mpilalao sarimihetsika ireo dia nahita indray akanjo mivalona izy ireo mba hanantonana ilay mpandinika mahay, toy izany fa ity trollongren kuchkuch ity
be dia be ny sambo
29 Janoary 2019 ao amin'ny 18: 10
Ratsy daholo izany ... tsy azo atao mihitsy. Nanomboka ny teatra! Mividiana tapakila na mandeha any amin'ny birao fandatsaham-bato ary mifidy ireo mpilalao ao The Hague izay marin-toetra:
29 Janoary 2019 ao amin'ny 18: 13
Kasja Bilderberg Ollongron: "Tsy dia misy dikany loatra ary tsy manao na inona na inona isika ary tsy misy dikany ireny sainam-pirinty ireny fa ny saina ihany no mihantona amin'ireo mpampihorohoro."
Theater izay manosika tantara an-tsehatra eo amin'ny ety DWDD .. inona no manaraka?
Ny lisitry ny orinasa sy ny famitahana dia mihazakazaka haingana!
29 Janoary 2019 ao amin'ny 18: 41
Eny Eny Eny Ary mbola afaka miara-miasa i Angletera
Ny hafatra apokalyptika: nopotehin'ny rafitra antsika ny atidoha ary nositranina ny atidohantsika. Maro ny fanakianana, ary avy amin'ny Minisitra Ollongren.
Ny mpitondratenin'ny media avy amin'ny teleketrano dia miantso ny dwdd: infotainment
Ny haino aman-jery rehetra dia samy manana ny tenan'i 1 saingy ahoana no hanazavantsika izany amin'ny mpifanolobodirindrina sy ny mpiray monina ao Holandy, ny atidoha dia mandeha amin'ny alina ary ny pôlitika rehetra dia manomboka indray.
Hans Teeuwen fotsiny dia tsy maintsy hanome Nisy nanakorontana mangingina pijery amin'ny veradertje Matematika scheinhijlKerk ny Ice (anarako dia bitrodia) (minitra 7, 33 Appeltjes Beatrix ny Orange) noho ny teatra.
Ny teatra dia teatra na indraindray?
29 Janoary 2019 ao amin'ny 19: 39
Soa ihany, anio alina dia misy ny mofo mahazatra ary milalao amin'ny endriky ny fiarandalamby, manipy zana-tsipìka sy ireo hetsika tsy misy dikany izay ahafahantsika manodina ny fotoantsika ... izany dia manomboka indray
30 Janoary 2019 ao amin'ny 10: 20
Ny televiziona dia tsy afaka ny ho lehibe (farany teo dia niaraka tamin'ny olona izay nanana efitrano lehibe kokoa noho ny latabatra fisakafoana, ny reny ary ny ray misy ankizy telo.
Ary satria i Mathijsje dia ao amin'ny trano fandraisam-bahiny isan'andro, tonga ho vinantovavinao tsara izy, toy ireo programa fanasan-tsakafo hafa, Jinek, Pauw, sy ny sisa. ianao no anaranao. Ny televiziona koa dia mandefa ny masony aminao, jereo eo ambany rohy.
1 Febroary 2019 ao amin'ny 12: 31
ary ny loka machiavelli dia mandeha mankany ....
Hitako fa ny loka machiavelli teo aloha dia nandeha tany amin'ny ben'ny tanàna tandindomin-doza.
Tsy fantatro ilay tantara, ary tsy namaky azy aho, fa fantatsika ihany.
1 Febroary 2019 ao amin'ny 12: 54
misaotra ny vaovao! Milaza izy fa ny fanjakana sy ny mpiasam-panjakana ao amin'ny fanjakana iray amin'ny alàlan'ny fihomehezana, lainga sy fitaka dia mijanona ao anaty lasely amin'ny vidiny sy ny fandanian'ilay andevo karaman'ny tompon-tany.
« Be dia be ny nanoratra momba ny Trumanshow ny 'zava-misy isan'andro'
Mijery tele na sarimihetsika na sarimihetsika isan'andro ve ianao? Avy eo ianao dia feno ny hypnosis ary tsy matotra »
Total visits: 8.604.841